Mpiasan’ny fanabeazana Mitaky ny fampiakaran-karama 50 000 Ariary
Nivory tetsy amin’ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena Anosy ny teo anivon’ny Sendikan’ny Mpiasa SPAEM (Syndicat du Personnel Administratif et Enseignant de Madagascar).
Nisy ny famelabelarana arahina adihevitra nampahafantarana ny Zo sy Andraikitry ny mpiasa satria maro no tsy mbola mahalala izany. Tanjona ny hanatsarana ny rafi-pampianarana sy ny tontolon’ny asa fanabeazana ary hiarovana ny zon’ny mpiasa sy ny tombontsoany. Tamin’ity fihaonana ity dia nangataka izy ireo ny hahazoan’ny mpiasa rehetra tsy ankanavaka ny fiakaran-karama 50 000 Ar ary tsy hisy mihitsy ny fitanilana. Tsy tokony ho fitakiana intsony no hatao fa efa fanatanterahana nanomboka ny volana janoary lasa teo, hoy ny tompon’andraikitra. Ankoatr’izay dia mangataka ihany koa ny mpiasa mba tsy hisy intsony ny famindran-toerana tsy ara-dalàna (affectation abusive) ataon’ny tompon’andraikitra eo anivon’ny CISCO sy DREN tahaka ny nahazo ireo mpiasa miisa 100 tamin’ny taon-dasa. Nanao antso avo ihany koa izy ireo ny tsy tokony hampidirana politika intsony ny sehatra fanabeazana izay mahataraiky hatrany io sehatra io eto Madagasikara. Izany hatrany no miteraka olana sy sakana, hoy ny mpitondra tenin’ny SPAEM ka tsy mampandeha mihitsy ny sehatra fanabeazana eto amin’ny firenena ary tokony hosongonana haingana.